မာတင်အင်ဖာတန်က စမတ်ဖုန်းကင်မရာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုပုံစံပြောင်းပြီး - Pandaily
မာတင်အင်ဖာတန်က စမတ်ဖုန်းကင်မရာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုပုံစံပြောင်းပြီး
Categories: Industry ကိုPeter Catterall စက်တင်ဘာ 18, 2021 စက်တင်ဘာ 18, 2021 မှာ Posted
“ ကျွန်တော်ထင်တယ် နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုထဲကို ဝင်လိုက်တယ်” လို့ နာမည်ကျော် ဗြိတိသျှ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးရဲ့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။မာတင္အင္ဖာ အခုအခါမှာတော့ နေရာတိုင်းမှာ စမတ်ဖုန်း ကင်မရာတွေ တပ်ဆင်ထားပြီး သူ့လုပ်ငန်းမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။
လတ်တလော တိုးတက်နေသော ပုံရိပ်များနှင့် အရည်အသွေး၊ အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးသူများက ဆိုရှယ်မီဒီယာမှ တဆင့် လက်ငင်း ဆက်သွယ်လာကြပြီး ကြည့်ရှုသူ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိနိုင်သည့်အပြင် အဆိုရှင် – Theme Relationship အသွင်ကူး ပြောင်းလာခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း စသည့် နယ်ပယ်များတွင် ဝါရင့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို မှတ်မိသလောက်ပင် ဖြစ်သည်။
အင်ဖာဟာ စမတ်ဖုန်းတွေကို ဖမ်းယူဖို့ အခွင့်အရေး ရှိပေမဲ့ ဘာတစ်ခုမှ မကျန်ပါဘူး။ “ အင္တာနက္မွာ အမိႈက္ ပံုေတြ အမ်ားဆံုး တင္ေနၾကတယ္၊ ဒါကို သင္မွတ္မိေနပါၿပီ၊ ဒါကို” သူက အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ ဆက္ျပီး ေျပာပါတယ္ “ လို႔ စကားမစပ္ ေျပာရင္း ဓါတ္ပံုေတြ အမ်ားဆံုး ရိုက္ထားပါတယ္၊ ဓာတ္ပံုေတြကေတာ့ အမိႈက္ ပံုေတြပဲရိုက္ထားတာမို႔ ဓါတ္ပံုေကာင္းေကာင္း ရိုက္ရမွာပါ” လို႔ ေျပာပါတယ္။
ယခုႏွစ္တြင္ Mr. Pal Vision + Mobile PhotoAwards ၂၀၂၁တရုတ်နည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့ စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Vivo တို့ဟာ National Geographic နဲ့ ပူးပေါင်းကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္လက္ခံေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမစတင္မီ အမ်ားျပည္သူထံမွ တင္ျပမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနသည္။ Final ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
ဒီၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အခြင့္အေရးေပးတဲ့အေနနဲ႔ မထင္မွတ္ပဲ mobile phone camera ကတဆင့္ စမ္းသပ္ၿပီး ဓာတ္ပံုပညာရပ္ကို လိုက္လံျပသခြင့္ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်း စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေက ပိုပြီးနှိမ့်ချလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယေန႔ေခတ္တြင္ ကင္မရာမ်ားေပါင္းစည္းကာ ေန႔စဥ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ဖမ္းယူႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားပင္လွ်င္ မ်က္ျခည္မျပတ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ BBC ၏ ဧၿပီလက ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး နယူးဇီလန္ ဓာတ္ပံုပညာ႐ွင္ တြမ္အန္း(Tom Ang) က “ယေန႔ေခတ္တြင္ စမတ္ဖုန္းကင္မရာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔က ကင္မရာမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေဒၚလာ ၇၀၇၇ တန္ဖိုးရွိေသာ ကင္မရာမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Vivo ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Guangdong ပြည်နယ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တယောက် ဖြစ်လာပြီး စမတ်ဖုန်းကင်မရာနည်းပညာနယ်ပယ်မှာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ကုမ္ပဏီကို တရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ X70 SeriesProfessional Photography Flagship ရှေ့ဘက် Selfie Camera လေးလုံးပါဝင်ပြီး နောက်ဘက် Camera တစ်လုံးနဲ့ ရှေ့ဘက် 32 Megapixels ပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒီလို နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စားသုံးသူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အလေ့အထတွေ ပြောင်းလဲလာပြီး တချိန်တည်းမှာပဲ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ သဘောမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ ဒါတွေဟာ အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်” ဟု အင်ဖာက ပြောသည်။ “ လြန္ခဲ႔တဲ႔ သံုးေလးဆယ္ေလာက္က တကယ္သင္ယူခဲ႔တာ မွန္ပါတယ္ခင္ဗ်၊ ထိေတြ႔မႈဆိုတာ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ခဲ႔ဘူးဗ်၊ မွန္တယ္ထင္တယ္ မွန္တယ္ထင္တယ္ဗ်၊ ဒါဆိုရင္ သင္တို႔ေျခေထာက္ကို ဆြဲေခၚသြားမွာပါ၊ ဒါဆိုရင္ သင္တို႔ေနာက္ေက်ာကို ဆြဲေခၚသြားမွာပါ၊ ဒါဆိုရင္ သင္တို႔ျမင္တာက သင္တို႔ရဲ႕ ဓါတ္ပံုပါအေၾကာင္းအရာက-သင့္ရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလား? ဒါဟာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိသလား? ဒါဟာ အျမင္ရွိသလား?”
မၾကာေသးမီက Bristol တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ျဗိတိန္ဓာတ္ပံုကို Promotion vivo ၏ VISION Mobile+PhotoAwards က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တင္ခဲ့သည္။ (Photo: Vivo)
Martin Pal ကို ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်ရာတွေကို ကမ္ဘာကျော်အေဂျင်စီတွေ ဆက်တိုက်ပြသထားပြီး Tott Art Gallery အပါအဝင် Chicago Art College နဲ့ London National Portrait Gallery တို့အပြင် Personal Photography စာအုပ်ပေါင်း ၄၀ ခန့် ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဟန်ပန်ဟာ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေ၊ Street View တွေကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုလေ့လာနေသူဖြစ်သလို ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဓနဥစ္စာမျိုးစုံနဲ့ လူမှုဘဝမြင်ကွင်းတွေကို ထင်ဟပ်ပြနေသူအဖြစ် နာမည်ကြီးနေသူဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဖာရဲ့ လက်ရာအများစုဟာ သိမ်မွေ့ပြီး ဟာသဉာဏ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဒါမှမဟုတ် တမင်ကြံရွယ်ပြီး အခြားအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ချည်နှောင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပုံစံတွေက ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေ၊ ခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိတာလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း တော်လှန်ရေးသည် ဗြိတိသျှဓာတ်ပုံဆရာများ ပထမဆုံး အကြိမ် မဟုတ်သော်လည်း သူ၏ လုပ်ငန်းခွင်တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အဖျက်အမှောင့်များနှင့် ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။
အင်ဖာဂန်ဟာ သူ့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတဲ့ အခါမှာတော့ ဝါဒီ သက်သက်လို့ ပြောတဲ့အခါကျရင် လေးလေးနက်နက် ဆက်ဆံခံရဖို့၊ ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ် အဖြူအမဲလုပ်ခံရဖို့ အတွက် အမှန်တကယ် ရောင်စုံ ပုံရိပ်တွေ ရှိနေပေမယ့် ဆယ်စုနှစ် တခုလောက် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ “အရောင်က လျှပ်တစ်ပြက် ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်လို့ ယူဆတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် စီးပွားဖြစ် ရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံ” လို့ သူက ပြန်ပြောပြတယ်။ သို့သော် ၁၉၇၀ နှစ်များနှင့် ၁၉၈၀ နှစ်များတလျှောက်လုံးတွင် အနုပညာအသိုင်းဝိုင်းက တဖြည်းဖြည်း မြင်တွေ့နေရသော ဓာတ်ပုံဆရာများသည် ရိုးရာအဖြူအမည်း မီဒီယာများမှ ရောင်စုံပုံရိပ်များကို လှည့်ပတ်ကြည့်ကြသည်။
မစၥတာအင္ဖာသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ နည္းပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။ အျဖဴအမည္းေခတ္ကို ျပန္သြားမလားဟု ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္မူ ၎က “အေျခခံက ေျဖစရာမရွိဘူးေလ။ ကိုယ်သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်၊ အရောင်၊ ရှုခင်း၊ အဝတ်အစားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှ ဒီလောက် အရေးပါတဲ့ဇာတ်ရုပ်မှာ ပါဝင်တယ်။ သင်ဟာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ခေတ်ပြိုင်ဘဝတွေကို ပြသဖို့ ကြိုးစားရင်း အရောင်အသွေးစုံတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ထပ်ဆောင်းရယူဖို့ လိုအပ်မယ် ထင်ပါတယ်။ “
ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့ သုံးစွဲမှုအပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ပညာရှင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲက ဆိုပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းမှာ အထူးသဖြင့် အင်စတာဂရမ်ကို အခြေခံထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေကို ဖန်တီးသူ တွေအတွက် ရုပ်သံလိုင်းတွေ၊ ရုပ်သံလိုင်းတွေကနေ တဆင့် ကြည့်ရှုသူ အမြောက်အမြားနဲ့ ထိတွေ့နိုင်တာမို့ အပျော်တမ်း ဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့ followers တွေ စုရုံးပြီး အာရုံစူးစိုက်ကြရပါတယ်။
ကနဦးတြင္ သံသယရွိ သူအခ်ိဳ႕သည္ မစၥတာအင္ဖာကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီးေနာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလက္ခံခဲ့သည္။ သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်စာမျက်နှာမှာလက်တလောမှာတော့ ကြည့်ရှုသူ သန်း ၅၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ပုံမှန်ဖြတ်သန်းမှု နှစ် ၅၀ အတွင်း ပုံရိပ်တွေကို မျှဝေဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
သူက ပြန်ပြောပြတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မလာခင် “ခင်ဗျားက ခင်ဗျားရဲ့ လက်ရာတွေကို မြင်နိုင်တဲ့ တခုတည်းသော နည်းလမ်းက ပြခန်းကို သွားပြီး ထုတ်ဝေသူတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေနဲ့ အတူတူ တန်းစီစောင့်နေရပေမယ့် အခုတော့ ခင်ဗျားက ခင်ဗျားရဲ့ လက်ရာတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ” တဲ့။ Pal-Theature က “ ပြင်းထန်တဲ့ ရိုက်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…”
မကြာသေးခင်ကဘဲ vivo ဟာ ၂၀၂၁ မှာ စမတ်ဖုန်း Photography ပြိုင်ပွဲကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ (Photo: vo/Vision Mobile+PhotoAwards ၂၀၂၁)
မထင်မှတ်ဘဲ စမတ်ဖုန်း တော်လှန်ရေးမှာ သရော်တတ်တဲ့ ဒုစရိုက်ပစ္စည်းတွေ အခုခေတ်စားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်ကြည့်တဲ့ အလေ့အထ (“ Selfie ယဉ်ကျေးမှု). Mr. Pal က “ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးစိတ်ဝင်စားနေပြီး ဒီဖြစ်ရပ်ကို ရိုက်ကူးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူ့ရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်နဲ့ nbsp;လို့တောင်စာအုပ်ထုတ်ဝေသည့် အကြောင်းအရာများ2019 .
ဒါ့အပြင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာခေတ်စားလာတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာလည်း ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုအချို့ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသျဖင့္ သတင္းဓာတ္ပံုပညာ၏ သေဘာတရားမ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက သာမန္ျပည္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မထင္မွတ္ဘဲ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးမည့္အစား ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ “တစ္နည္းအားျဖင့္ မစၥတာ အင္ဖာက “ခင္ဗ်ားေျပာႏိုင္တာက ဓာတ္ပံုဆရာရဲ႕ အခန္းက႑က ေရစက္ခ်တာဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က ဓာတ္ပံု႐ိုက္တာေတြ ရွိမွာပါ”တဲ့။
Topics: မြင်ကွင်းVivo က ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိတဲ့ Imagulation Chip V1 အသေးစိတ်ကို
သို႔ေသာ္ လမ္းေဘးဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအတြက္ စမတ္ဖုန္းက အဓိကအားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အရင်တုန်းကဆိုရင် Lens တွေအကြာကြီးရိုက်ဖို့အတွက် Professional camera ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ ကင်မရာတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် စိတ်ညစ်စရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိတတ်တာကြောင့် ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မဖမ်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အခု ဓာတ်ပုံဆရာ- ကိုယ်ချင်းစာတရားအရ Relationship တစ်ခုကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီ။
Pal က “ဒီစမတ္ဖုန္းေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလို႔ ခံစားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ သူတို့က ဘာခြိမ်းခြောက်မှုမှ မရှိပါဘူး မွေးကတည်းက လူတိုင်းမှာ ရှိနေကြတယ်” ဟု ပြော သည်။
မကြာသေးခင်က နည်းပညာအပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် လုပ်ငန်းအပေါ် ကျယ်ပြန့်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာပေမယ့် သူ့ကို ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေက အကြောင်းရင်းခံတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ မစ္စတာအင်ဖာက “မဟာဒီမိုကရေစီ အနုပညာ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမှာ လူသားတွေရဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အရင်ကထက်စာရင်လျှော့ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။